Ciidamada Jubbaland oo la wareegay degaan ka tirsan Jubbada Hoose | Baidoa24.com
Home WARARKA MAANTA Ciidamada Jubbaland oo la wareegay degaan ka tirsan Jubbada Hoose
Ciidamada Jubbaland oo la wareegay degaan ka tirsan Jubbada Hoose
Ciidamada Dowlad Goboleedka Jubbaland oo ay wehlinayeen Ciidamada Kenya oo ka tirsan howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa waxaa la sheegay inay howlgal kula wareegeen degaanka Janaay Cabdalle oo ka tirsan Gobolka Jubbada Hoose.
Degaanka Janaay Cabdalle oo ayaa waxaa uu ku yaallaa inta u dhaxeysa Magaalada Kismaayo iyo degmada Afmadow ee Gobolka Jubbada Hoose,waxaana saraakiil Ciidan ay sheegeen in muddo degaankaasi ay bar-koontorool oo ay lacagaha ku qaadaan u aheyd Al-Shabaab.
Ciidamada Dowlad Goboleedka Jubbaland iyo kuwa Kenya ayaa howlgalkooda waxaa ay kasoo bilaabeen degmada Admadow,waxaana saraakiisha Ciidamada Jubbaland ee howlgalka hoggaamineysay ay sheegeen in ay Al-Shabaab kala kulmeen iska caabin aan ballaarneyn,isla markaana degaanka Janaay Cabdalle ay la wareegeen.
Intii Ciidamada Maamulka Jubaland iyo kuwa Kenya ay howlgalka ka wadeen inta u dhaxeysa degmada Afmadow iyo Magaalada Kismaayo ayaa waxaa duleedka degmada Afmadow ay dagaal kula galeen Al-Shabaab, kadib markii ay weerar jidgal ah kusoo qaadeen.
Wararka laga helayo degaanka degaanka Janaay Cabdalle ee Gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ay sheegayaan in xaaladu ay tahay mid degan, hayeeshee weli Ciidamada Jubbaland iyo kuwa Kenya ay wadaan howlgallo kala duwan.
Howlgalkaan ay Ciidamada Jubbaland iyo kuwa Kenya kula wareegeen degaanka Janaay Cabdalle ee Gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa uu daba socday, kadib markii shalay Madaxweynaha Jubbaland uu Ciidamada ku amray inay bilaabaan howlgal ka dhan ah Al-Shabaab.
Previous articleQM oo kulan u qabaneysa Madaxda Dowladda Federaalka & dowlad Goboleedyada